Semalt: Ahoana ny fampiasana ny Python mba hanefana tranokala iray?
Manao asa goavana amin'ny fanadihadiana ny data, sa tsy izany? Afaka mitarika amin'ny fomba vaovao amin'ny fijerena ireo zavatra ary mampivelatra fomba fijery hafa. Ny tena mampalahelo dia satria ny angona tadiavinao dia tsy mora matetika. Azonao atao ny mahita azy ao amin'ny Internet, saingy tsy mety amin'ny format izay azo vidiana izany. Amin'ny tranga toy izany dia azonao ampiasaina ny teknolojia fanalana ny tranokala mba hikarakarana sy hanangonana ireo angona ilainao.
Misy fomba fitenenana maromaro sy fandaharam-pampianarana izay afaka manampy amin'ny alalan'ity dingana ity. Ity lahatsoratra ity dia hitarika anao amin'ny fomba fampiasana ny fiteny python mba hanakanana tranonkala iray. Hahazo fahalalana betsaka momba ny asan'ny pejy web ianao. Ho azonao ihany koa ny fomba hametrahana ny angon-drakitra momba ny tranonkala.
Ny fandefasana tsara indrindra dia ny fandefasana sy fametrahana ny Anaconda Python Distribution ao amin'ny solosainao. Azonao atao ihany koa ny maka lesona momba ny fototry ny fitenenan'ity programa ity. Ny toerana tsara indrindra azonao atao dia mety ny Codecademy indrindra raha tsy manana hevitra ianao amin'ity sehatra ity.
Ity torolàlana ity dia hampiasa ny lisitry ny lisitry ny faritra misy ny Polk Land ho an'ireo voafonja. Hanampy anao amin'ny fomba fampiasana ny script Python ianao mba hamoahana lisitry ny voafonja ary hahazoana angona toy ny tanàna fonenana sy hazakazaka ho an'ny voafonja tsirairay. Ny script rehetra izay hoentinay aminareo dia voatahiry sy misokatra any GitHub..Ity dia iray amin'ireo sehatra malaza amin'ny aterineto izay mamela ny fizarana ny ordinateran'ny ordinatera. Ny code dia manana lisitry ny fanehoan-kevitra izay mety hanampy anao.
Rehefa manaparitaka tranonkala, ny fitaovana voalohany hitadiavana dia tranonkala iray. Ny ankamaroan'ireo navigateurs dia hanome ireo mpampiasa fitaovana fanaraha-maso HTML izay manampy amin'ny fanesorana ny fanodikan'ny motera ary hahatakatra ny rafitra pejy. Ny fomba ahafahanao mahazo ny fitaovana tsirairay dia miovaova amin'ny navigateur ho an'ny olon-kafa. Na izany aza, ny fotony dia ny loharanom-pejy "view", ary azonao atao ny mahazo azy amin'ny alalana havanana amin'ny pejy mivantana.
Rehefa jerena ny loharano HTML an'ny pejy, dia tsara ny manisa ny tsipiriany momba ny rohy mankany amin'ny voafonja ao amin'ny laharana maromaro. Ny dingana manaraka dia ny manoratra ny script izay hampiasaintsika handraisana ity vaovao ity. Ireo fonosana roa ampiasain'ny Python izay hampiasaintsika amin'ny dingam-pihetsika mahery vaika dia ny Suppe Beautiful sy Requests. Ataovy azo antoka ny fametrahana azy ireo alohan'ny hanombohanao ny fehezan-dalàna.
Hanao zavatra telo ny tranonkala fanalana ny tranonkala. Anisan'izany ny famoahana ny pejin'ny lisitra sy ny fametahana rohy amin'ireo pejy antsipirihany, ny famoahana ny takelaka tsirairay amin'ny antsipiriany sy ny famoahana ny angon-drakitra, ary ny fanontana ireo angon-drakitra miankina amin'ny fomba fanivànana azy toy ny tanànan'ny trano sy ny hazakazaka. Raha vao azonao izany, ny dingana manaraka dia ny manomboka ny dingana kodia amin'ny fampiasana ny Soupa tsara sy ny fangatahana.
Voalohany dia ento an-tsokosoko ny pejin'ny lisitry ny lisitra amin'ny alàlan'ny URL URL request.get ary ampiasao ilay lasopy tsara tarehy mba hividianana azy. Aorian'izany dia manaisotra ny rohy amin'ireo pejy antsipirihany isika amin'ny alalan'ny famakiana ny andalana tsirairay. Rehefa tapahina ny antsipiriany, ny dingana manaraka dia ny hanaisotra ny firaisana ara-nofo, ny taona, ny hazakazaka, ny fotoana famandrihana, ary ny soatoavina anarana ao amin'ny rakibolana. Ny gadra tsirairay dia hahazo ny rakibolana ary ny rakibolana rehetra dia hiditra ao amin'ny lisitry ny mpifonja. Farany, mandohalika ny lozam-pandrosoana sy ny soatoavina ao an-tanàna alohan'ny hamoahanao farany ny lisitrao Source .